Kitra – Tompondakan’i Afrika 2016 : resin’ny Cnaps tao amin’ny kianjany ny Gor Mahia Kenya | NewsMada
Nivoaka ho mpandresy teo amin’ny lalao mandroso, amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, ny Cnaps Sport. Lavony teo amin’izany dingana izany ny Gor Mahia, avy any Kenya.
Fahombiazana ny lalao voalohany nataon’ny Cnaps Sport, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika. Resiny, tamin’ny isa 2 noho 1, ny Gor Mahia, tompondakan’i Kenya. Fihaonana mandroso, notanterahina tao amin’ny kianja Nyayo Nairobi, ny asabotsy lasa teo. Tsy nampoizin’ny Kenyanina mihitsy ny zava-nitranga satria noheverin’izy ireo fa toy ny tamin’ny taona lasa ihany ny zava-nisy.
Ny Cnaps Sport no nanokatra ny isa vao nanomboka 13 mn ny fihaonana. Baolina nampidirin’i Rinjala, taorian’ny tolotra nifanaovany sy Nono, izay nahavery tanteraka ny mpiandry tsatobin’ny Gor Mahia. Tsy nijanona teo fa nisesy ny fanafihana, nataon’ny mpilalao malagasy. Nisy ny baolina faharoa tokony ho faty, saingy maika loatra ireo lohalaharana, teo amin’ny famaranana izany. Nanao izay ho afany ny Kenyanina, saingy tsara ny fiarovantenan’ny Cnaps ka tsy tafavoaka mihitsy izy ireo. Nentin’ny roa tonta niala sasatra io isa 1 noho 0 io.
Nanafika hatrany ny Cnaps Sport
Toy ny tamin’ny fizaram-potoana voalohany ihany ny nitranga teo amin’ny fidirana faharoa. Tsy nisalasala mihitsy ireo mpilalaon-dRahery Be fa namezivezy baolina sy nanafaingana ny fanafihana. Nanao valim-panafihana ihany koa ny Gor Mahia, izay nitady hirika namonoana baolina, tamin’ny fomba rehetra.
Nosahalain’ny Kenyanina ny baolina, teo amin’ny minitra faha-71, rehefa nahadona baolina, tamin’ny tanany, tao anatin’ny faritra tsy azo ivalozana, ny vodilaharana malagasy. Nanondro avy hatrany ny faritry ny “penalty” ny mpitsara. Maty izany rehefa nodakan’i Enock Agwanda.
Na teo aza izany, tsy nihevitra ny hitazona ny isa ho sahala mihitsy ny mpilalaon’ny Cnaps fa nanohy ny fanafihany. Nanome toromarika ihany koa Rahery Be, ny amin’ny hamonoana baolina. Tafita izay hafatra izay, satria nahafaty baolina i Lalaina, teo amin’ny minitra faha-88 nilalaovana.
Efa tombony ho an’ny Cnaps Sport aloha ity fandresena ity, izay mbola hiatrika ny lalao miverina afaka tapa-bolana.